चे ग्वेभारा विश्वक्रान्तिका नायक हुन् ।
अर्जेन्टिनामा जन्मिएर क्यूवामा क्रान्ति सम्पन्न गरी बोलिभियाको जंगलमा शहादत प्राप्त गर्ने क्रान्ति नायक चे ग्वेभारा आज विश्वका श्रमजीवी मजदुरहरुको ढुकढुकी बनेका छन् । विश्व साम्राज्यवादसँग लडेर दुनियाँभर कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने महान उद्देश्य बोकेर उनी बोलिभिया पुगे । अदम्य शाहसका धनी चेको त्यहीँ हत्या भयो ।
तिनै महान विश्व क्रान्तिका नायक चे ग्वेभाराको जीवन कस्तो थियो त ?
४ वर्षको कलेज अध्ययन सकेर राजधानी ब्यूनस आयर्सको यूनिभर्सिटीमा मेडिकल विभागमा डाक्टरीको लागि उनी गए । तर उनको परिवारको चाहाना भने इन्जिनियर बनाउने थियो । क्यान्सर रोगबाट आप्mनी हजुरआमाको मृत्यु, आमाको क्यान्सरसँगको युद्ध र आफ्नै दम रोगका कारण उनी डाक्टरी पढ्नतिर लागे । उनले ६ वर्ष लामो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम ३ वर्षमै पूरा गरे । उनले अध्ययनको क्रममा राम्रो नम्बर ल्याउनतिर कहिल्यै सोचेनन् ।
त्यसपछि उनी १९५३ मा डाक्टरी पेशा छाडेर बोलिभियाको यात्रामा निस्किए । बोलिभियामा त्यसबेला पूँवीवादी सुधारवादी सरकारबाट राष्ट्रको टिन खानीलाई राष्ट्रिकरण गर्ने, जमिनहरु आदिवासी किसानहरुमा वितरण गर्ने सुधारवादी कार्यहरु भइरहेका थिए । त्यसले चे ग्वेभारालाई थप बल मिल्यो । चे विशेषज्ञहरु भन्दछन् –“ बोलिभियाले चेको जीवनमा क्रान्तिकारिता भर्नेदेखि लिएर चेको जीवनको अन्तिम संघर्ष गर्ने प्रेरणा दिएको थियो । उनको जीवनको शुरु र अन्य बोलिभिया मै भएको थियो ।”
आज क्यूवाको सान्ता क्लारा शहरको बीचमा चेले बन्दूक उठाएको २३ टन तौल भएको भव्य शालिक निमार्ण भएको छ । जुन शालिक १९९७ अक्टोबर १७ तारिखमा निर्माण भएको थियो । अक्टोबर ९ लाई क्यूबाली सरकारले ‘हिरोइक गुरिल्ला डे’ का रुपमा भव्य समारोह गरी कमरेड चेको स्मृति दिवस बनाउँदै आएको छ ।
जुन दिन चेको निर्मम हत्या भएको थियो । त्यो भन्दा पनि ठूलो आज दुनियाँका श्रमजीवीहरुको मनमा सदा बास बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिका नायक बनेर कमरेड चे ग्वेभारा बाँचिरहेका छन् ।
स्रोत : विश्वकान्तिका नायक, राजेन्द्र महर्जन, अन्तरक्रिया प्रकाशन प्रा.लि. २०६०वीकीपिडिया डट कम लगायत विभिन्न वेवसाइटहरु